Gunyana 1, 2018 arun
Bitcoin anotevera chikuru-software ndiwedzere magazini mutauro mutsva kuti crypto makiyi
The pose, vanozvipira yokuvaka boka seri inonyanya kufarirwa Implementation of Software, Bitcoin Core, nokukurumidza debuts kwayo rechi17 chikuru-software kusunungurwa, mumwe iyo unoisa kuti bumbiro dzakawanda zvikuru-taitarisira kuchinja. Imwe update chinhu chitsva “mutauro” kuwedzera ruzivo yokuwedzera kukosha kiyi runovabvumira nhoroondo dzavo dzakasiyana vanoshandisa zita. Like Kunyora mumwe “mipiro” uye mumwe “mari.” Mutauro mutsva ndehwokuti riiswe kiyi imwe neimwe Bitcoin (zvose paruzhinji uye pasiri) aine “chitaridzi” chinotsanangura chii chinogona kiinura nayo, “kuchinja nzira tinofunga pamusoro wallets,” Chaincode injiniya John Newbery akati.
Zvishoma Ndatsidzira Bitcoin kwema (PSBT) vari mumwe zvikuru-taitarisira kuchinja anofambirana bhiri. (PSBT ari ichidaro nokuda kwema dzisina zvakazara vakasaina, asi zvinogona kutapukira kumativi kusvikira pakupedzisira kutepfenyura.) Kubatsira pano ndiyo kuwana kuchengeteka ane Hardware chikwama uye zvivanakire imwe-software chikwama. One Hardware chikwama, coldcardwallet akaita chinozoiswa kuti kutengeserana nemasaini nzira kare. Izvi Bumbiro shanduko dzakazonaka yakawanda zvokusarudza, kunyange vanokwanisa boosting Bitcoin akangwara zvibvumirano uye zvakavanzika mamiriro. “PSBT kunoitawo zvinhu zvakafanana multisigs uye CoinJoins nyore kuita,” Bitcoin Core Contributor Andrew Chow akati. The nechinangwa izvi chikuru remitemo kuchinja kuti pakupedzisira kuwana bumbiro kusvikira apo munhu anoda kushandisa zvizere zvakanakira Bitcoin anogona kuita kudaro.
Kraken Daily Market Mushumo 31.08.2018
$100M nhumbi mhiri misika zvose nhasi